Madaxweynaha Jabuuti oo ku sii jeeda Sacuudi Careebiya & Ujeedada safarkiisa oo la ogaaday. – Puntlandtimes
Madaxweynaha Jabuuti oo ku sii jeeda Sacuudi Careebiya & Ujeedada safarkiisa oo la ogaaday.
RIYAD(P-TIMES)- Madaxweyhnaha dalka Jamhuuriyada Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta u safraya dalka Sacuudi Careebiya oo uu kaga qeybgalayo caawa dhameystirka heshiiska wadamada Eritrea iyo Itoobiya, kaas oo ay abaabushay Xukuumadda Sacuudi Careebiya.
Madaxweyne Geelle ayaa isna doonaya in dhexdhexaadin laga dhex-sameeyo isaga iyo dhigiisa dalka Eritrea oo ay isku hayaan arrimaha ku saabsan buuraleyda Dumeera oo ay labada dhinac ku dagaalameen, dawladda Eritrea ay qabsatay dhawaan.
Sacuudiga ayaa dadaal xoog badan galiyey sidii Eritrea ay ciidamadeeda ugala bixi lahayd Dumeera, taas oo lafilayo in ay dhacdo maalmaha nagu soo aadan, waxaana dadaalkan qeyb lixaad leh ka ciyaaraysa dawladda Sacuudiga.
Dawladda Soomaaliya oo horey u sheegtay in ay garwadeen ka tahay arrimahan ayaa sidda hadda muuqata laga tagay miro dhalinta heshiiska, waxaana sabab looga dhigayaa maadaama Sacuudiga & Imaaraatka oo isku xulufo ah aysan la dhacsaneyn dawladda Faderaalka.
Xogaha ayaa cadeynaya in talaabadan ay qeyb ka tahay isbedelada gobalka Geeska Africa oo meesha ka saaraya is heysiga wadamadan, waxaana heshiiska la gaari doono caawa ee laga tagay Soomaaliya uu ka dhigan yaahy fariin kale oo ku socota Madaxtooyada dalka Soomaaliya.